Ofisialy: Ny Meizu 16X dia haseho amin'ny 19 septambra | Androidsis
Eder Ferreno | | Meizu, About us
Ny datin'ny fampisehoana Meizu 16X no loharanon'ny fikorontanana be tao anatin'izay andro lasa izay. Satria noraisina ho azy dia hatolotra anio ny telefaona. Na dia anio alina aza dia efa nanamafy ny daty fampisehoana azy ny mpanamboatra sinoa. Tsy anio 12 septambra io fa mila miandry kely kokoa isika.
toy ny ny daty fampisehoana vaovao Meizu 16X dia hatao amin'ny herinandro ambony. Raha ny marina dia hitranga amin'ny andro iray izay hanehoana ny Xiaomi Mi 8 Youth Edition. Fampisehoana fahalianana roa amin'ny andro iray ihany.
Araka ny efa notsoahanao, Amin'ny 19 septambra izao no hanolorana ny Meizu 16X. Tsy tsaho izany, fa io dia efa voamarin'ny ora farany tao amin'ny ora farany. Ka efa fantatsika hoe rahoviana no tonga ity modely andrasana ity.
Tao anatin'izay herinandro lasa izay dia nahazo data marobe momba ity Meizu 16X ity isika. Misaotra an'io fa ny telefaona dia tsy mitazona fahagagana loatra ho antsika. Ny maro amin'ireo famaritana azy dia nidina taty aminay taorian'ny nanamarinana ny fitaovana TENAA amidy any Shina.
Ka tao anatin'ny herinandro iray nanolorana azy dia saika ny sivana rehetra no voasivana, toy ny nangoninay tamin'ny lahatsoratra teo aloha tao amin'ny tranonkala. Ny iray amin'ireo zavatra tsy fantatra manodidina ity Meizu 16X ity dia raha hapetraka amin'ny fomba ofisialy izany na tsia. Satria maro ny maodelin'ny marika tsy amidy any Eropa.
Afaka herinandro dia hanana valiny amin'ity fanontaniana ity isika, ary azontsika jerena raha ny masontsivana izay nasiana teo aloha no tena izy na tsia. Hihaino tsara isika amin'izao andro izao raha toa ka misy vaovao tonga momba ilay fitaovana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Meizu 16X dia haseho amin'ny 19 septambra